Archive du 20161118
Trafikana omby Miara-miasa ny sinoa sy ny dahalo ?
Tandindonin-doza ny omby Malagasy amin�izao fotoana izao. Efa ho lany tamingana ny omby any Atsimon�ny Nosy kanefa tsy mahataitra ny fanjakana izany.
Fisoratana anarana hifidy Hanomboka ny 1 desambra
Ny 1 desambra izao ka hatramin�ny 31 janoary 2017 no fotoana ahafahana manoratra na manavao ny fisoratana anaran�ireo olom-pirenena afaka mandray anjara amin�ny fifidianana izay ho avy, araka ny fanamarihan�ny avy eo anivon�ny CENI.
Governemanta Mahafaly Olivier Tsy ampy ny fanazavany momba ny Frankof�nia
Manao ranolava ny fanehoan-kevitra manodidina ny Frankof�nia. Ny fandraisana ny Frankof�nia na kaonferansa iraisam-pirenena dia tsy ratsy akory ary tena mety hitondra soa ho an'ny firenena mihitsy aza, hoy ny Sekretera jeneralin�ny antoko Teza, Ihanta Randriamandranto.
Noho ny Frank�f�nia Nahantona ny fifidianana eny anivon�ny Federasiona spaoro
Namoaka tenimita ny minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena, ny 14 novambra 2016, mampihantona ireo fifidianana fanavaozam-pitantanana eny anivon�ireo federasiona spaoro sy hetsika ara-panatanjahantena rehetra.
Taratasin�i Jean Mihetsiketsika an !
Mihetsiketsika an ! Mahafinaritra ahy ny mahita anareo toy izao e ! Hitondra soa sy filaminana ho antsika mianakavy tokoa anie ity lazainareo fa fety be mandritry ny 5 andro ity e !
Tanora mpitarika Havoaka ny andiany faha-12 amin�ny YLTP
Hotanterahina anio zoma 18 novambra hariva etsy amin�ny Carlton ny famoahana ny andiany faha-12 ireo tanora mpitarika nanaraka fiofanana tao anatin�ny fandaharan�asa Youth Leadership Training Program (YLTP) niaraka tamin�ny Friedrich-Ebert-Stiftung taona 2016.
Tontolon�ny sarimihetsika Miala any ny volavolan-dal�na hiarovana azy
Nivoaka tamin�ny fahanginana omaly Ramitandrinarivo Beau-Temps, talen�ny Office Malgache du Cin�ma fa tsy mbola manana fiarovana mitovy amin�ireo mpihira eto amintsika ny fianakaviamben�ny mpilalao sarimihetsika Malagasy.
Hanaiky lembenana foana ve ?
Be fandeferana loatra ny vahoaka Malagasy ka ataon�ny mpitondra amin�izay tiany hanaovana azy.